ဆိုလိုရင်းကား၊ “မောင်မြသွင်သည် သက္ကတ၊ မာဂဓများကို ကြိုးစားရန် အချိန်ပို၊ ငွေပို လိုသေးခြင်းပင် တည်း၊” စသည်ဖြင့် ‘မောင်မြသွင်’ နှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင် ဝေဖန်ချက် ရေးသား ထားပေသည်။ သို့ရာတွင် ထိုရတု၏ အစ အဖွင့်၌ မူကား ဦးစိန်တင်အား- “ခုခေတ်၊ ခုခါ၊ ခုသမယာဝယ်၊ မြန်မာစာဘက်၊ သိမ်မွေ့ချင်ကို၊ နှစ်သက်၊ ကြည်နူး၊ စိတ်ရည်စူး၍၊ ဂုဏ်ထူးယူကာ၊ ဘီအေမှာလျှင်၊ မြန်မာဘက်တွင်၊ မောင်စိန်တင်သည်၊ ပွဲဝင်မဆွ၊ ပန်းဦးရ၏။ ။ယင်းမှ တဖန်၊ ကြီးပွားရန်လျှင်၊ လန်ဒန် ရောက်တက်၊ အိုင်စီအက်စ်မှာ၊ သင်ဆဲသာတည့်။” ဟူ၍ မြန်မာ ပညာရှိ ပုဂံ ဝန်ထောက်မင်း ဦးတင် ကိုယ်တိုင် ချီးကျူး ထားရပါသည်။ စာနယ်ဇင်းများတွင် မြန်မာစာပေအကြောင်း ဆောင်းပါးများ ရေးသားသည်မှာ ပုဒ်ရေ (၇၀)ကျော်ရှိသည်။ တင့်⁠တင့်အမည်ဖြင့် ပြဇာတ်များလည်းရေးသားခဲ့သည်။ သိပ္ပံမောင်ဝအမည်ဖြင့် ဝတ္ထုဆောင်းပါးများ၊ အဝေးရောက်မင်းဦးအောင်ကြီး၊ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်၊ လယ်တီ ပဏ္ဍိတဦးမောင်ကြီး၊ ဒေါက်တာဘမော် စသော အတ္ထုပ္ပတ္တိဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ ခြင်းလုံး၊ ပန်းချီ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ ပြဇာတ် အကြောင်း ဆောင်းပါးများအပြင် စာအုပ်ဝေဖန်ရေး စာပေဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးများလည်းရေးခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသည့် နေ့မှ စ၍လည်း နယ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် နယ်ပိုင်၊ အရေးပိုင် စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် အမြို့မြို့သို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင် နေပြီးနောက် ရွှေဘိုတွင် ဂျပန်ဗုံးဒါဏ် အလူးအလဲခံရသည်။ နောက်ဆုံး မြစ်ကြီးနားသို့အသွား (တစ်ဆင့် အိန္ဒိယသို့ သွားရန်ကြံရွယ်)တွင် သူတို့စီးသော မီးရထားကို သက်ဆိုင်ရာတို့က ကန့်ဘလူဘူတာ၌တွဲဖြုတ် ထားခဲ့၍ ကန့်ဘလူတွင် သောင်တင်နေခဲ့သည်။ အရာရှိမိသားစုများဖြစ်၍ ရွှေငွေအမြောက်အများပါမည်ဟု တွက်ဆကာ ဓားပြ-၁ဝ⁠ဝခန့်က ဝိုင်းဝန်းဓားပြတိုက် ကြသည်။
စာဆိုတော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (ပထမ အကြိမ် ed.)။ ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်။ ဧပြီ ၂ဝ⁠ဝ၃။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့။ နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း။
မောင်သုတ အမည်ခံ ဗိုလ်မှူး ဘသောင်း (မဟာ ဝိဇ္ဇာ၊ ရွှေတံဆိပ်ရ); ဦးခင်အေး (မောင်ခင်မင်၊ ဓနုဖြူ) ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ ဌာန၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (၁၊ ဩဂုတ်၊ ၂ဝ⁠ဝ၂)။ (ပဉ္စမအကြိမ် ed.)။ ရာပြည့် စာအုပ်တိုက်။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ); |title= လွဲမှား သို့ မပါရှိ (အကူအညီ)
မင်းသုဝဏ်. "သိပ္ပံမောင်ဝ ခေါ် ဦးစိန်တင် ဘီ-အေ၊ အိုင်-စီ-အက်စ်". မြဝတီ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၆.
ကဗျာဗန္ဓသာရကျမ်း။ p. ၅၇။